Namuhla Psychology - yezindawo ethandwa kakhulu ukufunda eNtshonalanga. Lokhu kungenxa ukufuneka kakhulu ochwepheshe iphrofayela enjalo e Melika naseYurophu.
Okujabulisayo nge Psychology kwaphawuleka kule minyaka 5-10 kweminyaka, kanye nesithakazelo jikelele kwale sayensi kuyaqhubeka.
Amathuba zokusebenza kwengqondo e-Asia
Kwenye ingxenye yomhlaba, ikakhulukazi eNingizimu Asia, okuhlanganisa Sri Lanka, Psychology is kuyanda. Abantu abaningi uthole ulwazi ngokusebenzisa yesayensi ingqondo ongaqonda kakhulu. Abafundi bayaqonda ukuthi isifundo kwengqondo akugcini ngokuletha umuzwa imisebenzi professional ngokugxila emincane. Empeleni, lokhu isayensi luvula khathizwe ebanzi umuntu.
Isazi othole iziqu ze-bachelor in kwengqondo, has a sethubeni elihle ukuya wathola isikhundla esiphakeme emsebenzini. Kungaba ukusebenza emkhakheni marketing, ukukhangisa, imfundo, impilo yengqondo, kanye bahlanganyele yezinzwa izinsalela, nesayensi yebuhlakani, nabanye. Futhi, abantu abanesipiliyoni emkhakheni wezokusebenza kwengqondo, nethuba ukuthola umsebenzi kuhulumeni, ezizimele NGO. Ngakho, Psychology singasetshenziswa emikhakheni eminingi.
Kolombosky Institute for Ucwaningo Psychology (CIRP) e Sri Lanka ihlela ukunikeza abafundi indlela ukuthola iziqu ze-bachelor. Uhlelo imfundo ephakeme anikezwa CIRP, ihlose ukuhlinzeka ngokujulile ulwazi edingekayo ngesikhathi undergraduate ezingeni.
I amamojuli lwezifundo
Uhlelo hnd siqukethe 3 izingqimba, futhi ungqimba ngalunye kuhlanganisa 10 amamojuli, okumele igcwaliswe ezinyangeni eziyi-6. Ngakho, ukuthuthukiswa hnd kuthatha izinyanga ezingu-18. Phakathi nale nkathi, abafundi ukuthatha 30 amamojuli.
Phakathi 30 amamojuli 18 ziyisibopho futhi ezihlokweni wabelane kwengqondo, ezifana izici zenhlalo, engqondweni yethu, ukuziphatha, begazi psychodynamic. Labo abasele abanga-12 amamojuli uyazikhethela. Abafundi banelungelo lokukhetha kusuka uhlu 40 izifundo yokuqokwa ngesisekelo eyala enjalo phambili Psychology ezifana nengane kwengqondo, okungafanele kwengqondo emitholampilo, Psychology yenhlangano, Psychology forensic, ezempilo Psychology, ukwelulekwa okungokwengqondo nokunye. D.
Abafundi abaningi ukhethe isiqondiso okusekelwe endaweni okuyinto befisa ngokukhethekile. Lapho beqeda wonke amazinga amathathu abafundi hnd luyakwazi yokugcina ngonyaka B.Sc.
Izinzuzo betadisha Sri Lanka
University of Hertfordshire (UH) ingenye izikhungo engcono yesimanje zemfundo eNgilandi. Kuncike kubo ohlelweni Psychology uthola ukuvunyelwa yi-British Society of Psychology. CIRP abafundi nethuba ukuthatha inkambo iminyaka 2.5 futhi siwuqede 6 izinyanga ngaphambi kwabanye.
Uhlelo hnd okulingana eminyakeni emibili yokuqala B.Sc., futhi ukuqeqeshwa izobiza rupees 250,000 nje.
Hnd ihlanganisa iminyaka emibili Uhlelo B.Sc., kusukela inyuvesi ayinikeze eside namaholidi asehlobo.
Ngokusho CIRP nokuzinikela ubuhle academic abafundi ukuqeqeshwa nokuphathwa abakhethelwa ososayensi eziningana abaqeqeshiwe futhi owaziwa futhi ochwepheshe emkhakheni wezokusebenza kwengqondo. Khono is eyayiholwa uDkt UJanet LeValli, isazi sokusebenza kwengqondo American kanye nososayensi asebeneminyaka eminingi isipiliyoni amaningana amanyuvesi international njengoba uMongameli kanye neNhloko yoMnyango kwengqondo.
Kukhona eziyisikhombisa othisha esigcwele we M.Sc. futhi mayelana amabili abamenyiwe abafundisayo nge ziqu ezingeni Ph.D futhi M.Sc. Isibalo guest izikhulumi kuhlanganisa othisha abaphezulu ezindaweni ezifana ucwaningo indlela, izibalo kanye psychology zemfundo, kanye nalabo abanamakhono emkhakheni wezokusebenza kwengqondo, njengoba abaqhuba emitholampilo abezenhlalakahle, psychotherapists. Bafundisa abafundi amakhono awusizo futhi amasu.
Uhlelo ngamunye lwekutfutfukiswa kwemakhono
Ngaphezu theory module Yiqiniso kuhlanganisa ngabanye uhlelo lokuthuthukiswa kwamakhono okuhloswe ngazo ukuthuthukisa kuhlatiya nekuhlola nakanjalo nezobuciko ezemfundo. Ekupheleni kwalesi sikole bangaba uchwepheshe kweqiniso e isiyalo sakho.
I CIRP, okuyinto kuphela isikhungo ayimfihlo laboratory Consulting, anganikeza abafundi nge izici zokuhlola ezidingekile ukufunda. Isikhungo ifakwe electronic multimedia umtapo, ukuqeqeshwa amakamelo kanye nomfundi lounge yesimanje.
Ngaphezu hnd, CIRP ikunikeza inani izinhlelo degree in eyala eziningi emkhakheni wezokusebenza kwengqondo, igxile abantu kweminye imikhakha kanye nasemikhakheni abafuna ukusebenzisa ilwazi namakghono emkhakheni wezokusebenza kwengqondo. Ukubolekwa kwemali wathola ngesikhathi ukudlula lezi zinhlelo idluliselwe hnd, bese uvula ukufinyelela ohlelweni idigri abantu abanquma ukuqhubeka nezifundo zabo kamuva.
Yini ongakwazi ukukwenza ngolokuqala usuku Amathiphu